कोरोना संक्रमित गर्भवतीकाे सर्जरी गर्न पनि तयार छु:डा.जीवन धमला। – Namaste Dainik
May 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कोरोना संक्रमित गर्भवतीकाे सर्जरी गर्न पनि तयार छु:डा.जीवन धमला।
तर,विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति विभागमा कार्यरत डा.जीवन धमला आफू र आफ्नो परिवारको ज्यानको जोखिम मोलेर प्रसूती सेवामा सक्रिय छन् । उनले त्रास हुँदाहुँदै पनि नर्मल चेकजाँच मात्र नभएर विभिन्न स्त्री रोगसँग सम्बन्धित खोप,गर्भपतन,शल्यक्रिया सेवा दिइरहेका छन् । प्राकृतिक र इमरेजन्सी प्रसूति सेवाको लकडाउन अनुभव उनले कोशी अनलाइनलाई छोटकरीमा यसरी बताए:
लकडाउनको समयमा विभिन्न अस्पतालले टेलिफोनमार्फत परामर्श पनि गर्न थालेको छन् । तर सबै सेवामा फोनमार्फत परामर्श गर्न सम्भव हुँदैन । जसमध्ये प्रसूूति सेवा पनि एक हो । त्यसैले,यस्तो समयमा अस्पतालमा प्रसूूति सेवामा हेलचेक्र्याँई गर्नुहुँदैन । र,त्रासकै कारण कसैलाई उपचारबाट बञ्चित पनि पार्नुहुँदैन ।
प्रसूति एउटा बिरामी मात्र नभएर सन्तानको जीवनसँग पनि जोडिएको हुन्छ । र,डाक्टरको काम जीवन दान गर्ने हो लिने होइन । संकटको बेला भन्दै उपचार गर्नबाट तर्कियो वा केही ढिलो भयो भने आमा र शिशु दुवैको ज्यान जान्छ । जुन अपराधसरह हो । यसैले प्रसूति सेवालाई इमरजेन्सी सेवाका रूपमा लिइएको हो ।
अस्पतालमा प्रसूतिका लागि आउने सुत्केरीहरूको कोरोना जाँच गरिएको हुँदैन । तर कोरोना जाँच भएको छैन भनेर उनीहरूलाई उपचारबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । गर्भवती हुने,सुत्केरी हुने,व्यथा लाग्ने,र प्रसवको बेला पीडा हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन।
अस्पतालमा रोग लाग्ने सम्भावना धेरै हुने हुँदा अति आवश्यक नपरेसम्म अस्पताल नै नआउनु भनेर घोषणा गरिएको छ । तर,प्रसूति समस्याले घोषणालाई सुन्दैन पनि र मान्दैन पनि । प्रसूति समस्या प्राकृतिक भएकोले सेवा पनि इमर्जेन्सी नै हुन्छ । यसलाई रोक्न सकिँदैन।
समयमा राम्रो तरिकाले डेलिभरि गरिएन भने थप समस्या निम्तिन सक्छ । आमा र शिशु दुवैको ज्यान जान सक्छ । हामीले सकेसम्म अस्पताल आउँदा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्, प्रत्येक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग दूरी कायम गर्नुपर्छ र साबुनपानीले हात धुनुपर्छ भनेर बिरामी र कुरुवाहरूलाई सम्झाइरहने गर्छौँ । अस्पतालको गेटमा राखिएको साबुन पानीले हात धुने,स्यानीटाइजरको प्रयोग गर्न पनि भन्छौँ। बिरामीसँग एक जना मात्र भिजिटर आइदिन पनि हामी आग्रह गरिरहेका छौँ ।
संसारभरि मानव नरसंहार गरिरहेको प्राणघातक रोगबाट को त्रसित छैन होला र? डर कसलाई लाग्दैन होला र? धेरै जना अस्पतालमा आउने हुँदा अस्पताल आउने जो कोहीमा पनि संक्रमणको त्रास हुन्छ । अझै अस्पतालमा आउनेहरू धेरै बिरामीहरू नै हुनेभएकोले जोखिम अझै धेरै हुन्छ । हामी डाक्टर पनि त्रासबाट अलग रहन सक्दैनौँ । तर संकटको बेला त्रासलाई कारण बनाएर पेशाको दायित्वबाट भाग्न पनि मिल्दैन ।
मलाई पनि सुरुसुरुमा त एकदम डर लागेको थियो तर विस्तारै सामान्य रुटिन जस्तै काम हुन थालेको छ । आजकल डर पनि हराउँदै गएको छ। आफूमा संक्रमण सर्न सक्छ भन्ने डर भएपनि आफ्नो कारणले परिवारका सदस्यलाई पो सर्छ कि भन्नेचाहिँ बढी डर छ । त्यसैले,आफू र परिवारलाई संक्रमणबाट टाढा राख्न आफू सुरक्षित हुने हरेक प्रयास गरिरहेको छु ।